UZuma wadumela intatheli, wayicindezela odongeni wase eyiqabula, kusho incwadi | isiZulu
UZuma wadumela intatheli, wayicindezela odongeni wase eyiqabula, kusho incwadi
‘Umsebenzi oqalwe uKhwezi akumele ushabalale ngoba engasekho’
Uyafihlwa namhlanje uFezekile ‘Khwezi’ Kuzwayo
UKhwezi singamfanisa nemvu yomhlatshelo – DA
Johannesburg – Encwadini ezophuma maduze exoxa ngoFezekile Ntsukela Kuzwayo, kuvela imininingwane esola uMengameli Jacob Zuma “ngokudumela intatheli, wayicindezela odongeni wase eyiqabula”.
Le ncwadi esihloko sithi Khwezi, ebhalwe yilowo owayengumsakazi we-702 uRedi Tlhabi, ixoxa ngesigameko lapho uMengameli Zuma amemela khona intatheli yesifazane emzini wakhe oseForest Town, okungumuzi ofanayo nalowo uKhwezi asola uZuma ngokumdlwengulela kuwo.
Ngokubika kweSowetan, kuthiwa le ntatheli elingeke lidalulwe igama layo, yamenywa nguMengameli kulandela umhlangano weSouth African National Editors’ Forum ukuze bezoba nengxoxo “ekhethekile ngezinto ezibucayi” phambi komuntu amethembayo.
Kuthiwa bafika emzini kaZuma, wabe eseyalela le ntatheli ukuba imphelezele aye kwelinye igumbi ngoba “kukhona into afuna ukuyitshengisa yona”, kuchaza le ncwadi.
OLUNYE UDABA: UKhwezi singamfanisa nemvu yomhlatshelo – DA
Yize le ntatheli yayingazizwa kahle ngalokhu, ayizange inake.
“Le ntatheli yamlandela, wabe esevula elinye igumbi yathi uma ingena yabona ukuthi kusekamelweni likaMengameli lokulala. Kwathi kusenjalo yezwa izandla zikaZuma seziyangile, uMengameli eseyincindezela odongeni wabe eseyiqabula isikhathi eside emlonyeni.
“Umhlane wale ntatheli wawuncike emnyango, yathi ukushaqeka ngesikhathi ulimi lukamengameli selingena emlonyeni wayo,” kuloba uThlabi kule ncwadi.
Uqhuba ngokuthi le ntatheli yagcina ikwazile ukuphunyula, noZuma wayiyeka kodwa elokhu emamatheka.
Kuthiwa yatshela uZuma ukuthi isesikhathini, wathi kulungile “bazophinde bazame ngesikhathi esizayo”.
Le ntatheli ithi yayingamkhohlwa uKhwezi ngesikhathi ebika udaba lwakhe, kepha ngemuva kwalesi sigameko yabona ukuthi kusho ukuthi wayekhuluma iqiniso.
UKhwezi wasola uZuma ngokumdlwengula ngo-2005, waphuma phambili ecaleni ngo-2006.
UKhwezi wadlula emhlabeni ngonyaka owedlule.